Cesc Fabregas Oo Shaaciyey Laacibkii Ku Qasbay Inuu Ka Tago Chelsea Iyo Qaabkii Tababare Maurizio Sarri Uu Ula Dhaqmay | Warmaalnews.com
Halyeyga khadka dhexe ee Cesc Fabregas ayaa markii ugu horreysay daaha ka fayday sababihii uu uga tegay kooxdiisii hore ee Chelsea xagaagii tegay, markaas oo uu heshiis u saxeexay kooxda reer France ee Monaco.
Fabregas oo ay da’diisu tahay 31 jir ayaa bishii January ka baxay Stamford Bridge xilli ay suurtogal ahayd inuu qandaraas cusub ka helo Blues, balse waxa uu ka doortay inuu tago koox cusub oo uu helayo boos joogto ah.
Tababaraha Chelsea, Maurizio Sarri ayaa Fabregas geliyey kaydka, waxaanu ka door-biday Jorginho oo uu kala yimid Napoli, halka uu dhexda horena u diray N’Golo Kante oo markii hore kubbad-burburiye ahaa.
Sida ay qortay warbaahinta Metro, go’aamadii uu tababare Sarri ka qaatay shaxdiisa koowaad qaybtii hore ee xili ciyaareedka, ayaa Cesc Fabregas ku abuuray dareen ah in aanu marnaba fursad ka helaynin Chelsea, ayna wiiqmi doonto xirfaddiisii iyo jacaylkii uu u qabay kubadda cagta.
“Waqtigayga oo dhan, waxa muhiim ii ah inaan hiigsi cusub maskaxda ku hayo. Waxaan joogay Chelsea oo aan heshiis cusub u saxeexi karayey, siina joogi karayey, laakiin tababaraha cusub ayaa la yimid laacib wiilkiisii oo kale u ah.” Sidaas waxa yidhi Cesc Fabregas oo ka hadlayey sababihii ku riixay inuu ka tago Chelsea.
“Waxaan doonayey inaan kulan walba ciyaaro, laakiin markan ay adkaatay. Kubadda cagta waan jecelahay. Ma doonayo kaliya inaan ku farxo inaan Chelsea u ciyaarayo. Wax kasta oo sababtu tahayba, suurtogal may noqonaynin xattaa haddii aan ahay ka wanaagsan, amaba uu mid kale fiican yahay, inaan ciyaar walba safto, waxaanan go’aansaday inaan imaaddo mashruuc ka duwan, waxaanay ila tahay inaan qanaaco badan ka helay.” Ayuu raaciyey.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka Febregas kaliya ma caddaynayo in imaatinkii Sarri iyo Jorginho ay isaga ku qasbeen inuu ka tago Chelsea, balse sidoo kale waxay bannaanka keenayaan sidii waayihiisii galbeedka London uu niyad-jabka ugu dhamaaday.